Shiinaha keydka Heat wasakhda soo saareyaasha - Warshad kuleylka kuleylka ah - Dongguan Guancheng qiraysa Hardware Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Kuleylka kuleylka
Ku-xirnaanta kuleylka wanaagsan iyo saameynta kuleylka kuleylka ee hiitarka kuleylka kuleylka ee ka sarreeya. Tani waa habka ugu wanaagsan ee hiitarka kuleylka kuleylka ku shaqeeya. Badanaa waxaa loo isticmaalaa qalabka warshadaha, mashiinada caafimaadka, qalabka duulista iyo meelaha kale!
Faa'iido darrooyinka ku saabsan luminta madaxa alxanka: Habka alxamiddu wuxuu u baahan yahay qalab gaar ah oo alxanka lagu xiro iyo qalabka shaqada si loo helo taageero wanaagsan ama bushing, suuf, qalab isku haysa, iwm.
Dabeecadaha kuleylka kuleylka dabeecada leh waa adeegsiga tikniyoolajiyadda kuleylka kuleylka iyo mabda'a radiators badan oo jir ah ama kuleyliyeyaal iyo nidaamyo lagu hagaajinayo wax soo saarka cusub.
Dabeecadda dusha sare ee dabeecadda lafteedu waa saxan dhan oo loogu talagalay ka shaqeynta, fiditaanka iyo xiriirka ayaa ka dhigaya kuleylka kuleylka aad u wanaagsan.
Radiator wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo saxanka hoose iyo tuubada ah, saxanka hoose wuxuu noqon karaa naxaas / aluminium, iyo tuubada guud ahaan waa biibiile naxaas ah, sidoo kale waxaa jira adeegsiga tuubbo bir birta ah, caabbinta daxalka ayaa ka sii wanaagsan, saldhigga miiqda ugu horeysa out the jeexdin, sida ka dib markii la rakibay tuubada la habeeyay, / birta birta ah iyada oo la jarayo dhererka loo baahan yahay, iyadoo loo eegayo baahida tuubbada laabaya, oo leh qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'hydraulic press' ayaa lagu cadaadin doonaa jeexitaanka salka